श्रीमती व्रत बस्दा श्रीमानको आयु बढ्छ ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः भाद्र ७, २०७४ - साप्ताहिक
श्रीमती व्रत बस्दा श्रीमानको आयु बढ्छ ?
जतिबेला श्रीमान्ले पनि श्रीमतीका लागि व्रत बस्ने दिन तोकिन्छ, त्यो दिन नै यसको उत्तर खोजुँला ?
- तेञ्जिङ शेर्पा, इभेन्ट आयोजक
श्रीमती तीजको व्रत बसे भगवान् शिव खुसी हुन्छन् अनि उनले ब्रह्मालाई सोर्स लगाएर व्रतालु श्रीमतीको श्रीमान्को आयु बढाइदिन्छन् भनेर हाम्री आमाले भन्नुभएको थियो । आफ्नो त न श्रीमान् छन्, न यस्ता कुराको विश्वास नै लाग्छ ।
- भगवती खड्का युनिका, रेसलर
श्रीमतीलाई भोक लागेर झर्किन–कराउन सक्दिनन्, अनि एक दिन भए पनि श्रीमतीको कचकच सुन्नु नपरेपछि श्रीमान्को आयु एक महिना बढ्छ क्यार !
- सुदाम थापा, संगीतकार
मैले पनि बुझ्न नसकेको कुरा हो यो । यो एउटा आस्था मात्र हो, यद्यपि यस्तो आस्था राख्नु पनि पर्छ ।
- निराजन लुइँटेल, मोडल
समय आएपछि कसैको केही लाग्दैन, तैपनि श्रीमान्को लामो आयुका लागि श्रीमतीज्यूहरूले व्रत होइन, बरु श्रीमान्लाई मर्निङ वाक, योग, कसरत तथा समय–समयमा आइपर्ने शारीरिक समस्याअनुसारको ओखतीमूलो गर्न दबाबमूलक उर्दी जारी गर्न सके मनले चिताएअनुसारको प्रतिफल प्राप्त होला ।
- सन्दीप सापकोटा, सञ्चारकर्मी
खोइ आफ्नो त बिहे नै भएको छैन । अब बिहेपछि श्रीमती व्रत बस्लिन् अनि त्यसको अनुभव होला, त्यसपछि भन्छु है ?
यो भगवान्प्रतिको विश्वास र आस्था हो । त्यही आस्थाका कारण श्रीमतीले व्रत बस्दा श्रीमान्को आयु बढ्छ ।
- विकास खतिवडा, फोटोग्राफर
यदि व्रत बस्दा आयु बढ्ने भए कुनै पनि विवाहित पुरुष चाँडै मर्दैनथे ।
- हरिशा बानियाँ, अभिनेत्री
यो एउटा विश्वास हो । जो साँचो मनले आफ्नो श्रीमान्को लामो आयुको कामना गर्दै व्रत बस्छन्, माता पार्वतीले उनको कामना पूरा गरिदिनुहुन्छ । व्रत वस्दा श्रीमान्को आयु बढ्छ भन्ने कुरा विज्ञानले प्रमाणित त गरेको छैन, तर विश्वास मजबुत भयो भने अवश्य पूरा हुन्छ ।
- अप्सरा घिमिरे, गायिका
श्रीमतीले आस्था र मायाले बसेको व्रतबाट आयुभन्दा पनि उनीहरूबीचको प्रेमचाहिँ अवश्य बढ्छ ।
- रवि श्रेष्ठ, विज्ञापन निर्माता
उमेर नै बढ्ने कुरा त नहोला । भावनात्मक रूपमा माया बढाउन, श्रीमान्सँग प्रेम प्रगाढ बनाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यचाहिँ पूरा हुनुपर्छ ।
- परशुराम रिजाल, गायक
श्रीमतीले व्रत बस्दा श्रीमान् प्रफुल्ल हुन्छन्, उनीहरूबीचको माया अझ बढ्छ । मायामा सन्तुष्टि भएपछि मानिसको आयु बढ्छ ।
यी सब त भन्ने कुरा न हुन् ।
- अर्जुन तिवारी, छायाँकार
हिन्दू धर्ममा भगवान्को पालादेखि नै श्रीमती व्रत बस्दा श्रीमान्को आयु बढ्छ भन्ने विश्वास छ ।
श्रीमती व्रत बस्दा फलफूल, दूध, दहीजस्ता स्वस्थ चिज खान्छन् । श्रीमतीले त्यस्ता चिज खाँदा श्रीमान्ल्े पनि साथ दिन्छन् । स्वास्थ्यवद्र्धक चिज खाएपछि उमेर त बढिहाल्छ नि ।
- मञ्चिन शाक्य, मोडल
श्रीमती व्रत बस्दा श्रीमान्ले घरमा काम गर्नुपर्ने भएकाले एक दिन भए पनि शारीरिक व्यायाम हुन्छ, त्यसपछि आयु पनि बढ्छ ।
- नरेश पौड्याल, निर्देशक
श्रीमती व्रत बस्दैमा श्रीमान्को आयु बढ्ने कुरामा मलाई पटक्कै विश्वास छैन, तर असल, चरित्रवान्, सुन्दर एवं समझदार श्रीमती हुने पुरुषको आयु अरूको भन्दा पक्कै बढी हुन्छ ।
- जीवन भट्टराई, अभिनेता
श्रीमतीको आयु घटेर श्रीमान्मा सर्ने पो हो कि ?
- प्रल्हाद बोगटी, संगीतकार
बढ्ने होइन, घट्छ । व्रत बसेपछि भोकै भएकी श्रीमतीलाई रिस उठछ, उनलाई रिस उठेपछि त्यसको फल श्रीमान्ले भोग्नुपर्छ । त्यसपछि श्रीमान्को आयु फिनिस ।
- पवन शर्मा, अभिनेता
यो आस्था हो तर श्रीमतीले व्रत बसिरहिन् भने पक्कै पनि आयु बढ्छ, व्रतको बेला झगडा हुँदैन अनि श्रीमान् फ्रेस रहन्छन्, त्यसपछि अलिक बढी बाँच्छन् कि ?
बढ्दैन, नत्र त श्रीमतीको व्रतको प्रभावले श्रीमान्हरू २–३ सय बाँचेको खबर पढ्न पाइन्थ्यो होला नि ।
- कमल के क्षेत्री, गायक
आफ्नै स्वास्थ्यका लागि हो भने ठीक, बूढाबूढी नै एक–अर्काप्रति माया देखाउन व्रत बसेका हुन् भने झन् ठीक । श्रीमान्का लागि भनेर श्रीमती व्रत बस्नुचाहिँ बेठीक ।
- शान बस्नेत, चलचित्र लेखक
एक दिनको खानपानको पैसा बच्यो भन्ने खुसीले श्रीमान्को आयु बढ्ने हो कि ?
- सविन बास्तोला, अभिनेता/निर्देशक
श्रीमतीले डाइटिङ गर्ने भएपछि श्रीमान्ले पनि धेरै कमाउनु परेन, अनि बढेन त आयु ?